အားကစား။ | Myanmar News Blog
- Myanmar - Myanmar Locals
- Myanmar News Blog - IT Store
Myanmar News Mobile RSS Contact Home အားကစား
အင်းလေးရိုးရာ လှေလှော် သရုပ်ပြပွဲ ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ရန် အစီအစဉ် မရှိ	အားကစား။	မြန်မာနိုင်ငံ လှေလှော် အဖွဲ့ချုပ်က ဆီးဂိမ်း လှေလှော် ပြိုင်ပွဲ မစတင်မီ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာ သရုပ်ပြပွဲ ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများ လာရောက် ကြည့်ရှုရန် နှင့် ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့် နိုင်ရန် အတွက် စီစဉ် ထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
Full story@TheYangonTimes ဂျာနယ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆိုက်ရောက် ရာတွင် ထူးခြားသော အစီစဉ် များဖြင့် တင်ဆက် သွားရန် စီစဉ်ထား	အားကစား။	Coca-Cola က သယ်ဆောင်မည့် 2014 ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆုဖလားကြီး မှာ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပရိသတ်များ အတွက် အံသြ မှင်တက်ဖွယ် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှု များကိုလည်း ကျင်းပ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (MFF) ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နှင့်အတူ မိုင်ပေါင်း ၉၂၀၀၀ ကျော် ခရီးစဉ် ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ် အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလား သီးသန့် လေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ သယ်ဆောင် လာမည် ဖြစ်သည်။
ဆီးဂိမ်းအတွက် WiFi အင်တာနက်လိုင်းများ တစ်ပတ်အတွင်း ပြီးစီးမည်	အားကစား။	ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲ တွင် အင်တာနက် WiFi ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် အားကစား ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့် နေရာ များတွင် လိုအပ်မည့် အင်တာနက် လို်ငး အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ လာမည့် သီတင်းပတ် တွင် ပြီးစီးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Full story@7DayNews ဂျာနယ်
ဆီးဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် Call Center များမှ သိရှိနိုင်မည်	အားကစား။	ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် စတင် ကျင်းပမည့် အရှေ့တောင် အာရှ ဆီးဂိမ်း အားကစား ပြိုင်ပွဲမှ ရလဒ်များ အားလုံးကို ဆီးဂိမ်း တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ သတင်း အချက် အလက် ထုတ်လွှင့်ရေး ဌာန (IBC) နှင့် မိုဘိုင်း Application များ အပြင် ရတနာပုံ Call Center များမှလည်း သိရှိ နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
http://seagamesmm.com/, http://27seagames2013.com/, http://myasoc.com.mm/, http://myasoc.org/, http://www.mosports.gov.mm
​BBC အကောင်းဆုံးဆုရရန် မာရေး ရေပန်း	အားကစား။	ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၄ ဗြိတိန် တင်းနစ် သမား အန်ဒီမာရေး သည် BBC ရုပ်သံ ဌာနမှ ချီးမြှင့်မည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွက် အားကစား ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထူးချွန်ဆု ရရှိရန် ရေပန်းစား နေကြောင်း၊ မာရေး အနေဖြင့် ဇွန်လ အတွင်း ကျင်းပ ခဲ့သည့် ဝင်ဘယ်လ်ဒန် ချန်ပီယံ ရှစ် ဂရင်းစလင်း ပြိုင်ပွဲ တွင် ၇၇ နှစ်ကြာ ဝေးကွာ နေသော ချန်ပီယံ ဆုကို ပြန်လည် ရယူ ပေးနိုင် ခဲ့သည့် အတွက် ရေပန်းစား နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော် အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဟု သတိပေးခဲ့သော်လည်း ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု ပက်ကွီအို တုံ့ပြန်	အားကစား။	နာမည်ကြီး ဖိလစ်ပိုင် လက်ဝှေ့ သမား ပက်ကွီအို အနေဖြင့် ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွက် ပေးဆောင် ရမည့် အခွန်ငွေ ပီဆို ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ကို ပေးဆောင် ခြင်း မပြုပါက ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သိမ်းဆည်း ခံရ နိုင်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် အာဏာပိုင် များက သတိပေး ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ အချိန်တွင် အာဏာပိုင် များက အခွန် တိမ်းရှောင်မှု ဖြင့် ဖိလစ်ပိုင် ရှိ ပက်ကွီအို နှင့် ဇနီး ဖြစ်သူ တို့၏ ဘဏ်စာရင်း ကို ပိတ်ပင် ထားပြီး ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွက် အခွန်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၀ ဒသမ ၂ သန်း ပေးဆောင်ရန် သတိပေး ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
MFF ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ပြုလုပ်မည်	အားကစား။	မြန်မာ နိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (MFF) ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီ တွင် ပြုလုပ် သွားရန် စီစဉ် ထားကြောင်း၊ MFF အနေဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို နိုင်ငံ တကာ နည်းတူ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
AFC လူမှုရေးထူးချွန်ဆုရ MFF ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ	အားကစား။	အာရှ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (AFC) မှ ချီးမြှင့်သည့် လူမှု ထူးချွန်ဆု (AFC Dream Asia Award) ရရှိ ခဲ့သော မြန်မာ နိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် နှင့် အဖွဲ့ သည် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာခဲ့ ကြောင်း၊ MFF သည် ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျော်ဒန် နှင့် ကာတာ နိုင်ငံ များကို ကျော်ဖြတ် ကာ ယင်းဆုကို ရရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘေဆယ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း ချယ်လ်ဆီး ရှုံးထွက်အဆင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိ	အားကစား။	ချန်ပီယံ လိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် (၅)၊ ပထမ နေ့ ပွဲစဉ် များကို နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ရာ ချယ်လ်ဆီး အသင်းမှာ အဝေးကွင်း တွင် ဘေဆယ် ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့သော် လည်း ရှုံးထွက် အဆင့် တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
သတိပေးချက်နှင့် မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို ဆီးဂိမ်းစ်မကျင်းမမီ ထုတ်ပြန်	အားကစား။	မြန်မာ နိုင်ငံက အိမ်ရှင် ဖြစ်ခွင့် ရသည့် ဆီးဂိမ်းစ် တွင် အထိမ်း အမှတ် လိုဂိုနှင့် လာဘ်ကောင် များကို အသုံး ပြုပြီး ဆီးဂိမ်းစ် လှုံ့ဆော်ရေး လုပ်ဆောင် သူများ အနေဖြင့် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်၏ လေးပုံ တစ်ပုံ နေရာစာ ကိုသာလျှင် ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် ကို ကြော်ငြာ ရမည် ဖြစ်ကာ ယင်းထက် ပို၍ ကြော်ငြာ ထားပါက တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ အရေး ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Full story@ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်
အေစီမီလန်အသင်းကို ကွင်းအတွင်းမှ ထွက်ခွင့်မရအောင် ပရိသတ်များ ကြိုးပမ်း
ဘေယန်မြူးနစ်အသင်း ၃၈ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း
ဆီးဂိမ်းစ် ဘောလုံးပွဲလက်မှတ် ရောင်းချမည့်နေရာများ သတ်မှတ်
AFC ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် လူမှုရေးထူးချွန်ဆု လျာထားစာရင်းတွင် MFF ပါဝင်
ဖိလစ်ပိုင် လက်ဝှေ့သမား ပက်ကွီအို ချန်ပီယံဘွဲ့ ကာကွယ်
ဆွီဒင်ဘက် ဟက်ထရစ် သွင်းပြီး ပေါ်လက်တာစံချိန် စီရိုနယ်ဒို လိုက်မီ
ယူကရိန်းကို သုံးဂိုးပြတ်နိုင်ခြင်းမှာ ဘောလုံးလောက၏ မှော်ဆန်ခြင်းဟု ပြင်သစ်နည်းပြဆို
တောင်အာဖရိကကို ရှုံးသင့်၍ ရှုံးခဲ့ဟု စပိန်နည်းပြ ညည်းတွား
၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲတွင် တင်းနစ် အားကစားနည်း ပယ်ဖျက် ခံရ
ဆီးဂိမ်းစ် Web Portal ကို လာမည့်အပတ်တွင် Android မှ ကြည့်နိုင်တော့မည်
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page 1 of 33	ဒီစာမျက်နှာက အကြောင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေ သိအောင် LIKE ခလုတ်ကို ကလစ် လိုက်ပါ။ We have 471 guests online
မြန်မာ သတင်းများ ၂၀၁၃
၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ဖော်ပြခဲ့ ပြီးသော သတင်းဟောင်း များကို ဖတ်ရှုလိုပါက ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါသည်။	ယနေ့ ပေါက်ဈေး
မြန်မာတွေ ဘာလုပ် ဘာဖြစ်
ပြည်ပ အလုပ် ခေါ်စာ
ပြည်တွင်း အလုပ် ခေါ်စာ
မြန်မာ ရှာဖွေအင်ဂျင် (မြန်မာဂူးဂဲ)
မြန်မာ အင်တာနက် လမ်းညွှန်
ပိဋက သုံးပုံ - မြန်မာဘာသာ
Embed news on your site
Myanmar News (in Burmese)
ISO Standard Myanmar Unicode ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ ဘာသာ လုံးဖြင့် တိတိကျကျ ရှာနိုင်ပါသည်။	Copyright © 2013 Myanmar News Blog. All Rights Reserved. Designed by webdesignwebdev.com.